Deyntii Bankiga Horumarinta Afrika uu ku lahaa Soomaaliya oo la bixiyay - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaDeyntii Bankiga Horumarinta Afrika uu ku lahaa Soomaaliya oo la bixiyay
Deyntii Bankiga Horumarinta Afrika uu ku lahaa Soomaaliya oo la bixiyay
March 24, 2020 Puntland Mirror Somalia 0
Wasiirka Maaliyada Soomaaliya iyo Madaxweynaha Bankiga Afrika. [Isha Sawirka: AFDB]
Abidjan-(Puntland Mirror) Deyntii Bankiga Horumarinta Afrika uu ku lahaa Soomaaliya ayaa la tirtiray kadib markii ay si buuxda $122.55 u bixiyeen Dowladdaha UK iyo Midowga Yurub, taasoo meesha ka saareysa xanibaadii deymaha bog cusubna u furi doonta xiriirka u dhaxeeya Bankiga iyo dalka Soomaaliya.
Madaxweynaha Bankiga Afrika Akinwumi Adesina ayaa sheegay in ay taariikh cusub u tahay Soomaaliya.
“Waxaan dhab ahaantii ku faraxsanahay in Bankiga Horumarinta Afrika uu sameeyay hoggaankii loo baahnaa si horey loogu socdo ku guuleysashada wadaxaajoodka taasoo tirtiraysa deynta Soomaaliya lagu leeyahay,” sidaa ayuu ku sheegay war-saxaafadeed.
Soomaaliya ayaa sanadihii u dambeeyay dadaal ugu jirtay sidii looga cafin lahaa deynta lagu leeyahay oo gaareysa $5 bilyan. Bankiga Adduunka ayaa bishii hore tirtiray deyntii uu ku lahaa Soomaaliya, halka IMF dhawaan laga filayo.
December 19, 2019 Soomaaliya oo ku rajo weyn in deynta laga cafiyo bisha Febaraayo 2020
Odayaasha dhaqanka gobolka Nugaal oo ciidamada gadoodsan ee Puntland u jeediyay in ay ka baxaan kantaroolka koonfureed ee magaalada Garoowe
Garoowe-(Puntland Mirror) Odayaasha dhaqanka gobolka Nugaal ayaa u jeediyay ciidamada gadoodsan ee Puntland in ay ka baxaan kantaroolka koonfureed ee magaalada Garoowe halkaas oo ay qabsadeen saddex beri kahor. Shir guud oo ay maanta oo [...]
Madaxweyne ku xigeenka Puntland oo ka codsaday ummada Soomaaliyeed in ay la shaqayso madaxweynaha cusub ee Soomaaliya
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweyne ku xigeenka dowladda Puntland ayaa sheegay in ay la shaqayn doonaan madaxweynaha cusub ee Soomaaliya. Wareysi gaar ah oo ay la yeelatay idaacada maxaliga ah ee Radio Daljir ayuu Cabdixakiim Cumar Camay [...]